Khayraadka Caafimaadka Maskaxda Oo Information Waayo, qaxootiga iyo muhaajiriinta | USAHello
Waa maxay caafimaadka maskaxda? caafimaadka maskaxda waxay ka dhigan tahay sida caafimaad maskaxdaada iyo fikradaha yihiin. caafimaadka maskaxda saamayn ku leh sida aad u malaynayso iyo dareemaan. Baro dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda iyo noocyada kala duwan ee cudurrada dhimirka. Fahamka waxa caafimaadka maskaxda iyo jirada maskaxda waa kaa caawin doona inaad ogaato wixii aad samayn haddii adiga ama qof aad garanayso la il qaba dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda.
In USA, dadku waxa ay arki caafimaadka maskaxda oo qayb ka ah caafimaadka guud ee qofka. Iyagu way og yihiin dad badan oo ay leeyihiin arrimaha maskaxda. Mareykanka ma aha xishoodaan inay ka hadlaan caafimaadka maskaxda. Waxay raadiyaan siyaabaha ay si wanaagsan u hesho.
Sida cudurrada jirka, dhibaatooyin badan oo maskaxda ma aha dhab ah. Laakiin sidoo kale jeclaan cudur jirka, qaar ka mid ah cudurrada dhimirka iyo cudurada waa mid aad u xun. Waxay keeni kartaa dhibaato laga cabsado.
Maxaa sababa cudurka dhimirka iyo cudurada?
cudurka dhimirka iyo cudura waxaa keeni kara waxyaabo badan oo. Waxaa ka mid ah:
Hidaha (taariikhda caafimaad ee qoyska)
shaqo A walaac ama nolosha guriga
The hormoonnada iyo kiimikada ee maskaxda
Sidee xanuunada maskaxda ku tusi?
Calaamaduhu waa dareenka iyo dhaqamada aad qabto sababta oo ah cudur. Disorder ka dhigan tahay wax aan shaqaynayn sidii caadiga ahayd. Waxaa jira cudurada qaar badan oo maskaxda kala duwan iyo astaamaha badan oo kala duwan.
Calaamadaha ugu caansan waa murugo, cabsi, cadhadii, jahwareer, iyo dabeecada aan caadi ahayn. Iyada oo xanuunada caafimaadka maskaxda oo halis ah, oo dhan oo ka mid ah astaamaha caadiga xoog yihiin. Dadka ma ay awoodaan in ay qaadaan on nolol maalmeedka. Waxa laga yaabaa in aan ogaado waxa dhabta ah ama aan dhabta ah.
Noocyada cudurrada dhimirka iyo cudura
cudurrada The liiska this yihiin qaar ka mid ah dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda ee ugu badan.
disorder stress Post-traumatic
Post-Traumatic Stress Disorder waxaa lagu magacaabaa PTSD soo gaabiyo. PTSD waa falcelin caadi ah dareenka ay u dhacdo daran ama walaac.
Dad badan ayaa la kulmi karaan diiqad fudud. diiqad fudud waa marka aad dareento murugo ama aadan jecleyn inaad wax sameyso. Haddii ay taasi la soo dhaafay in ka badan laba toddobaad, waxaa laga yaabaa inaad murugo weyn.
ciladda wallaaca guud
Schizophrenia waa jirro halis ah oo maskaxeed. Waxaa waxyeeleyso sida aad u aragto dunida iyo sida aad u dhaqmeyso.
disorder qabsiga dhacaya marka dadka ha ka soo kabsado isbedel weyn ama waayo-aragnimo u adag. Dhakhaatiirta inta badan qaxootiga iyo doolka leeyihiin aayaa.
Laba-cirifoodka waxa muujiyay isbeddelo ah niyadda oo aad u daran. isbeddelo ah niyadda oo aad u daran tahay marka aad ka dareemayso aad u murugo badan in ay dareen ku faraxsanahay in dhibic ka mid ah isagoo manic tago.
Fawdada cunitaanka dhici marka aad qabto dhibaatooyin la cunaynin, maxaa yeelay, aad ku fikiraysid inaad xun oo ku saabsan jirkaaga. Waxaa laga yaabaa inaad aad u badan ama aad u yar cuno iyo maraan miisaanka xad-dhaaf ah isbedel.
isticmaalka Maandooriyaha xanuunada waxaa sidoo kale loo yaqaannaa “ku xadgudubka mukhaadaraadka.” Waxay dhacaan marka aad cabto khamro badan ama ha qaadan daroogo aad u tiro badan. Your isticmaalka daroogada iyo khamriga dhaawacdaa jirkaaga iyo noloshaada u waxyeeleysay siyaabo xun.